Monday, 29 August 2011 15:22	नागरिक
इन्द्रबहादुर राई- लेख्न थालेको ५३ वर्षअघिबाट हो। पहिले मैले उपन्यास लेख्न थालें- आज रमिता छ। त्यो सन् १९५८ मा लेखिसकेको थिएँ। त्यतिबेला मेरो विचार साहित्य के थियो?
उपन्यासको भूमिकामा मैले दुईपटक भनेको छु- साहित्यले जीवन र जगत्को अध्ययन गर्छ, जीवन र जगत्लाई लेख्छ। यो कुरा पत्रपत्रिका, पुस्तकहरूमा पनि लेखिएको पाइन्छ। विभिन्न लेखकले सोचेर विचारेर लेखेको हुनुपर्छ। अरु कतैबाट थाहा पाएर पनि लेखिएको हुनसक्छ।
मैले चाहिँ त्यो कहाँबाट टिपें? सायद एउटा सफाइ दिनुपर्छ। मैले त्यसबेला पढेको एउटा पुस्तक थियो, अंग्रेजीका ठूला लेखक म्याथु आर्नोल्डको एसेज इन क्रिटिसिजम्। त्यो पुस्तक सन् १८६५ मा प्रकाशित भएको थियो। पुस्तकमा आर्नेल्डले जर्मन कवि गेटेका सम्बन्धमा लेखेका छन्, 'उनका कविता नेसेसरी सब्जेटयुक्त छन्।' कविहरूको हुनैपर्ने सब्जेट म्याटर हो - लाइफ एन्ड द वर्ल्ड। जीवन र जगत् भन्नुपर्ने शब्द अंग्रेजीमा त्यहाँ पाएँ। अनि त्यसैलाई भूमिकामा लेखें। जीवन र जगत्लाई लेख्ने कोसिस त्यो उपन्यास र पछिका कथा संग्रहहरूमा पनि भयो।
अघि त म्याथु आर्नेल्डलाई पछ्याएर जीवन र जगत्लाई लेख्छौं, लेख्नुपर्छ भन्थ्यौं। अब त जीवन र जगत्लाई बुझ्नै कठिन रहेछ, सायद बुझ्नै सक्दैनौं भन्नेमा हामी पुग्यौं। जीवन र जगत्लाई लेख्छौं भन्नुभन्दा यसलाई बुझ्न जति कठिनता छन्, ती कठिनताहरूलाई लेख्छौं भन्ने पर्छ कि भन्ने अवस्थामा पुग्दा हामी लीलालेखनको छेउमा आइपुग्छौं।